Tsika uye tsika dzeIndia, tinozviongorora dzese | Absolut Kufamba
Pese patinofunga kuenda kune imwe nyika iri kunze kwezvedu zvatinoziva kana izvo zvisiri mukati medzimwe nyika dziri pedyo netsika nemagariro edu, tinokura kusahadzika nezvetsika maererano nehukama pakati pevanhu, chikafu, tsika nemhemberero., Nezvimwe, asi ipapo inogara iri nzira yekuziva kuti makambani aya ndeapi uye anoshanda sei uye mune iyi nyaya, isu tichaenda kuziva iyo tsika nemagariro eIndia.
1 Mitauro muIndia
2 Sosaiti muIndia
3 Tsika muIndia
4 Hukama hwehukama muIndia
5 Gastronomy muIndia
Chimwe chezvikamu zvakakosha zvenyika mutauro uye nezvimwe munyika senge India. Zvichienderana nedunhu ratiri, zvichataurwa nemitauro yakasiyana kunyangwe mimwe yacho isingazivikanwe nehurumende yepakati.
Mutauro wepamutemo munyika uye, nekudaro, mumatunhu ayo ese chiHindi, asi zviripo madimikira mazhinji asingazivikanwe akadai seBangali kana ChiUrdu asi vamwe vakaita seNepalese.
Imwe yetsika dzeIndia ndeyekuti Indian society inofamba nema hierarchies, nekuda kwesimba reHinduism, uye munhu wese anonyatsoziva nezve yavo chinzvimbo chinzvimbo nekuremekedza mhuri yavo, shamwari kana boka revanhu vasingazivikanwe.
Zvichienderana nezviri kutaurwa, mumatanho mune zita chairo remunhu padanho repamusoro, semuenzaniso: kuchikoro, mudzidzisi anonzi "guru", sezvo ivo vachionekwa sosi yekuziva; mumamiriro ezvinhu emhuri, "Tateguru" ndozvinoita baba, mutungamiri wemhuri kana "shefu" semukuru maneja mubhizinesi. Aya madhijitari anofanirwa kuve anongwarira nekuti chiyero chevanhu chinoenderana navo.
Chimwe chezvinhu chinotirova pamusoro petsika dzeIndia uye chakadzika midzi mudzidzo yayo uye nzanga yayo iko kushomeka kana kusavepo kwemaIndia kutaura. "Aihwa", kureva, Hachisi chirevo chekuti vagari venyika ino vanofarira kutaura nemuromo kana zvisina mazwi, sezvo ivo vachizvitora senzira yekubiridzira kana kuodza moyo mumwe munhu, nekuda kwechikonzero ichocho ivo vanofarira kupa imwe mhando yemhinduro iyo yavanofunga kuti takamirira kana kutipa imwe sarudzo yakafanana nezvatiri kutsvaga kana kutarisira tsvaga.
Panyaya yekugadzana kana misangano, kuti vadzivise kuwira mune zvinoodza moyo mune ramangwana pamwe nekutadza kuenda, vanodzivirira kupa mhinduro dzechokwadi pamwe nezvakawanda, asi vopa mhinduro dzakajeka kusimbisa maawa chiitiko chisati chaitika.
Hukama hwehukama muIndia
Kana tikatarisa pa kushamwaridzana nevamwe, kureva kuti, muhukama hwemunhu-ne-munhu kana hwemunhu ane boka, chinamato, chinzvimbo chemagariro uye dzidzo vane huremu hwakakura mune chimwe chinhu chiri nyore asi chakasimba sekukwazisa: kana uchitevera madimikira, patinosvika paboka tinofanirwa kukwazisa munhu wekare kana wepamusoro soro chinzvimbo uye zvichingodaro kusvikira boka rose rapera. Kana nguva yasvika yekuonekana, tinofanirwa kuzviita mumwe nemumwe.
Tichakurumidza kuziva kuti ndedzipi dzakanyanyo shandiswa kubata nevanhu vekumadokero nekuti vanowanzo kwazisana, kunyangwe, mune iyi nyaya, isu tinofanirwa kuvamirira kuti vatambanudze maoko kana isu tisina chokwadi chaizvo nekuti nekuda kwekutenda kwezvitendero ikoko Kazhinji hapana kusvina.maoko pakati pevarume nevakadzi, kunyangwe hongu pakati pevarume nevarume uye pakati pevakadzi nevakadzi.
Imwe nyaya yakakosha mu Tsika dzeIndia ndiyo kudya, imwe yeakajeka uye anonhuwirira pasirese, izere zvisingaverengeke zveArabhu, zveTurkey uye kunyange zveEurope zvinokonzeresa nekuda kwenhoroondo yayo yekukunda kwakapfuura nekuvhozhokera, ichigadzira chikafu chayo sosi yeupfumi hwechikafu uye dura remaresipi eIndia nema condiment.
Pakati petsika dzegastronomic yeIndia, yayo nyeredzi ndiro ndiyo curry nezvinonhuwira zvayoSenge ginger, coriander, turmeric, sinamoni, uye dzakaomeswa mhiripiri, semuenzaniso, kusanganisa kwavo kunoita Indian curry mashiripiti mukurumwa kwese. Hatigone kukanganwa nezvetii, ye chero kunhuhwirira, kunyangwe izvo zvavanofarira zviri Darjeeling (mhando yeti nhema yakasikwa mudunhu reIndia ine zita rimwe chete) uye Assam (imwe mhando yeti nhema, inozivikanwawo senge yapfuura, yakajairika nyika yeIndia ine zita rimwe chete), yaitora chinwiwa chemunyika kubvira muzana ramakore rechina sezvo iri protagonist mumisangano yese nenguva dzekusangana, ichiva chikamu yemaitiro ehupenyu hweIndia.
Uyewo nyama nehove dzegungwa zvakakosha, hove nehuku, nekuti munyika ino nyama yemombe haidyiwe, nekuti inoonekwa seinoyera muchitendero chechiHindu uye nyama yenguruve inopfuura zvinorambidzwa muchitendero cheMuslim.
Unoziva here zvimwe tsika dze india? Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda, pano tinokusiya iwe ne indian zvipfeko zvakajairika.
Pamwe ndinongoda kuziva kuti rin'i yemhino inorevei, uye nei vakadzi vazhinji vaine iro kuruboshwe asi ndaona vamwe vakadzi vanozvipfekedza kurudyi, nekuti
Petra iyo emoxxa akadaro
Haha, sei uchida kuziva, kwaziso?
Pindura Petra iyo emoxxa
Icho chimwe cheshongedzo gumi nematanhatu dzevakadzi.
hazvina kushata uye unofanirwa kuremekedza tsika nekuti sekungoona kwatinovaita vakashamisa vanotionawo vakadai
Idzi tsika hadziwanzo asi dzakanaka, kukwazisa kubva kuMexico
Ini ndinoda tsika dzavo nekuti hadzikuvadze chero munhu, kunze kwekuroora vanhu vaviri vakatoda vamwe, asi kudanana nekugara pamwe ichokwadi, kudanana kunobva pakuona asi izvo zvinokurumidza kupera parudo runomuka zvechokwadi runogara zvachose. Tsika yechiHindu inoyevedza uye haizombomira kuva zvakadaro. Ndokumbirawo murambe muchiisa nezvake.
Kubva kuMexico, kwaziso kuvaHindu vese.
Rino peji rinonyanya kunakira basa ndakarida ndaikumbira vanhu kuti vasaposta macomments akashata kupage ndinotenda
Tsika dzavo dzakanaka kwazvo uye ndinoda kusangana nemunhu akapfuma
kuti vese vakapfuma
ivo vakachena bastards ane mangy buts m4e ndinovapfuudza nepakati peiyo xoro's quilt kjakjakajkakajakjakajkajkajkajakjakjak
Pindura kuna javierita
Beatriz zea palacios akadaro
Mhoroi munhu wese, ndinoda tsika dzeIndia, ndinoshamiswa nehupfumi hwese hwavanadzo. Ndinoda kuziva zvakawanda nezvetsika dzezvitendero zvavo, zvinoshamisa hongu! asi zvirokwazvo yakanyatso tsika ku. Ndiri kufarira uye ndinoziva ino nyika ne fis! mumwe munhu kundiudza kuti ndakasvika sei uye nderupi rwungadai rwuri rwendo rwupfupi, necucrero kana ndege. kunyanya ndingawana sei mimhanzi yako nemavhidhiyo pano muEuador
Pindura Beatriz zea palacios
lorena lopez akadaro
Zvimwe hazvina musoro, asi zvakadaro, nyika yega yega ine rusununguko rwekusarudza zvarinoda
Pindura kuna lorena lopez
Indu tsika inonakidza kwazvo, remekedza zvinotendwa nemunhu wese kana iwe uchida kuti varemekedze zvako.Ndatenda kuti peji racho rakanaka kwazvo.
Iwe unofanirwa kunyora kuti mhuri dzeIndia dzakadii kuUK uye zvimwe zvinhu zvakaita sekudya kwavo, zviyeuchidzo ...
wuaooo izvo zvandaisaziva asi hei ndine chiratidziro pane izvo ii ini ndatoziva zvekutaura hahaha
Pindura kuna baba
Ndinokutendai zvikuru nemupiro wenyu, zvakanaka kwazvo kuziva tsika nemagariro etsika dzedzimwe tsika…. tsika yakanaka kwazvo yeIndia.
laura nalleli akadaro
Handina kunyatsonzwisisa uye
asi zvakadaro, zvakandipa zvakawanda
Pindura kuna laura nalleli
Chirevo ichi chinoti avo vanoshoropodza zvakanyanya ndevaya vanoziva zvishoma, kune vamwe vasati vadzidza kunyora nekushoropodza semasayendisiti.
worales ini ndinoda india zvese zvakanaka
Ini ndinoda tsika dzeIndia, imhaka yekuti ndinoipedza ndichiona iro renhau reIndia nyaya yerudo
Ivo vanofanirwa kupa zvakanyanya, pamusoro pezvose, nhoroondo uye dhizaini yeIndia, hupfumi, huwandu hwevanhu uye zvimwe zvakakosha zveiyo nyika inoshuvira.
Pindura kuna Nostradamus
Ichokwadi ndechekuti, iro peji rinotonhorera uye ndinofunga kuti iwe unofanirwa kuremekedza tsika dzevamwe vanhu kuti vagotiremekedzawo
Iyi info yakanaka kwazvo asi yaisazokuvadza imwe info !!!!!!!!!!!! Ndatenda
Pindura kune esol
javi colombia akadaro
chinhu choga chandinobvunza rudo, uye kuti vasikana vanowana murume.
Kana dziri mombe dzine rombo rakanaka, iyo chete nzombe inodzidya
Pindura Javi colombia
EULALIA SALCEDO ORELLAN akadaro
Kutenda kuna MWARI ndakave nemukana wekuve muIndia yakanaka nekuti ndichazodzoka rimwe zuva ndine shamwari dzinoshamisa mumasram emudzidzisi PARAMAHANSA YOGANADA MUMAGUTA akasiyana eIndia ndine ndangariro dzakanaka dzavanemweya zvakanyanya zvekuti vekuMadokero handina, isu tinonyanya kuda zvinhu ndinokuda iwe India nevanhu vayo uye tsika.
Pindura kuna EULALIA SALCEDO ORELLAN
EULALIA SALCEDO ORELLANA akadaro
Ini ndinobva kuEcuador, guta rangu ndiCuenca, chirevo changu ndechekuti India inoshamisa kune vekuMadokero, musiyano watinowana ipapo maererano netsika uye chikafu chakasimba kwazvo, asi munhu anofanirwa kufamba nemweya uchida kugamuchira nzira uye nzira yekurarama kubva kwavari vanhu vavo vakanakisa nzvimbo dzokusangana nadzo dzinoshamisa nekuti munhu anouya akashamisika rimwe zuva ndichadzokera kuIndia NDINOKUDAI
Pindura kuna EULALIA SALCEDO ORELLANA
light yoatzin jimanez roldan akadaro
Ndinoda gasca, ndinoda kuitora
Pindura ku luz yoatzin jimanez roldan
tarisa zvino akadaro
popo iri peji
Pindura kuti utarise ya
ichi chi fucking porkeria
uku fucking damn porkeria
Ndinobvisa zvandakati ndinoda peji rino
izvi zvakanaka fucking zvinotyisa
fucking peji ndinomuvenga
Zvakanaka, kuravira kunotyora vanhurume, asi zvinoratidza kuti hauna kudzidza uye kuti haugone kumira wega, hauzive kukoshesa chero chinhu.
India yakanaka asi vagari vayo vakasviba uye vakasviba, zvinonyadzisa kuti havagone kuve nero nani redzidzo, nekuda kwehurombo hwavo hwakanyanya.
JOSE MANUEÑ akadaro
Pindura kuna JOSE MANUEÑ
KUSVETSEDZWA KUNYANYA ... HA, HA, HA ...
Enigmatic nyika, India, ngatiremekedzei tsika dzenyika yese. Iyo nyika ine vanhu vakanaka kwazvo. Ndinokudai
Ndinokuda Juan Carlos
Ndinokuda musho mwana
Pindura kuna juana
Ini handinzwisise kuti nei varume vachipfeka jira hombe mumisoro yavo, pane chero munhu anoda kuti ndipindure izvozvo?
Ndinoda kuziva kuti iye ndiDalit, ndinoziva kana akazvinyora nemazvo kana kwete
Mhoroi, ndiri mudambudziko guru, ndakadanana nemuHindu, ndinobva kuMexico, handinzwisise zvakawanda nezveSaxism. Ini ndichafanirwa kunzwisisa kuti vanongoroora vakadzi vechiHindu chete
jaja toy felizzzzzzzzzzz makorokoto kune uyo akaita peji rino ndinofunga kuti munhu akangwara kwazvo
eeeeey ndanga ndichiverenga macomments uye pane mumwe munhu anonyepedzera kunge ari x Jesus Christ ndikamuti rega aite izvozvooooooooooooooooo}
Pindura kuna fernanda
Ini ndinoda tsika uye zvese zvinoreva India. Ndinoda mukomana weIndu
Zvakanaka chokwadi chinonakidza kuti ivo vanogona kugadzira mamwe mapeji emara kupfuura kare, asi kune avo vanoti iro peji harishande, iwo ari morons
Pindura kuna hermoxa
Chinhu chakashata, havafanire kurega varume vane mhanza vachidaro
Jacqueline Range akadaro
Indus anoshanda mukambani yangu uye mumwe wavo anoda kundiendesa kuIndia, saka unofanirwa kuve wakagadzirira chero chinouya. Kwaziso kubva kuRosarito Baja California Mexico
Pindura JACQUELINE RANGEL
Izvo zvakaenda pasina kutaura kuti vane chitendero chakasiyana
Ndinokuda oriana, ndinokuudza nezve peji rino. nomweya wangu wose
aaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooooooooooooo .. ..
neniwo iwe neni zvakanyanya
Pindura kuna orianna
Mhoro! Ini ndoda kuziva kuti zvinorevei kupa 3 kutsvoda pamuromo panguva yechakavanzika mhemberero?
mgiel estrada akadaro
Manheru akanaka ,, ndinoda kuziva kana neijuijan zita rechishandiso chinoshandiswa nevanhu, icho chavanosvira .. mumwe munhu angandiudza .. ndatenda.
Pindura mgiel estrada
jaime novoa akadaro
Indian budiriro kufamba kwenzvimbo dzakatenderedza nyika
Pindura kuna jaime novoa
Izvi zvakandibatsira zvakawanda kuti ndiongorore nezve India uye wandakagadzira peji rino ndinokutendai kwaziso dzaGarcia ini ndiri Mambokadzi Charlotte akafa makore bhiriyoni apfuura
Iyo peji rakanaka asi ivo vanofanirwa kudoma zvimwe zvinhu zvakaita sekuti nei vakadzi vaine tsvuku mole pahuma yavo zvinoreva kuti kana vakaisa izvo vanozove rakanakisa peji pane ese andinoverenga kurumidza kune uyo anonzi Jesu Kristu iye
zvataurwa nepeji kutonhorera uye kwakanaka chaizvo uye kuda alejandro ndinokuda
maura quispe baltazar akadaro
Ndinoda kununura tsika kubva kare asi zvishoma zvishoma zvingave zvakanaka
Pindura kuna maura quispe baltazar
Ndiri kuenda kunomiririra misika yeIndia nezvose nezvipfeko, ndeapi machira echinyakare emaIndia uye ndingapfeka sei kana ndisina zvipfeko kana zviwanikwa? uye vanotengesa chii?
hesi iwe kana ukarega kufongora uchinetseka zvakanyanya hakuna XD nd q ber: *
Pindura kune liany
uri capo akadaro
Pindura kuna sos capo
Zvakanaka, izvi hazvinei nazvo, asi kana iwe ukaverenga, Franco Gomes, ndinokuda, pendejoo (ini ndaida kunyora), ndiwe wakanyanya
Ini ndinoda nemoyo wangu wese uye nemweya mukomana anobva kuIndia uye netsika dzenyika iyoyo izvozvi tinofanirwa kuparadzana uye takachema zvakanyanya nekuda kwerudo rwedu uye zvino chii chichaita nerudo urwu rwatinonzwa kuti NDINOKUDAI WANGU SHANI WANGU NOUSHAD <3
ofelia reyes garcia akadaro
zvese izvi zvinotonhorera
Pindura kunaelia reyes garcia
Iri ibasa rakanaka. Ndinoishandisa mukereke kumiririra tsika zhinji …………… ndinovada vanobva kuCosta Rica
Pindura kuna Dayana
Marie Antoinette akadaro
haisi tsika dzavo dzese dzinobuda: /
Pindura kuna maria antonieta
NDATENDA, NDAKAKOSHA, uye JUAN ANODZIDZA KUTENDA ZVINOGONESWA NEVANHU.
Miriam Velasco akadaro
Saka unogona here kuroora munhu asiri werudzi rwako? Ndinozvitaura nekuda kwemamessage ari padandemutande ekuroora
Pindura Miriam Velasco
Pindura kuna shishi
Ini ndoda kuenda kuLas Vegas pane iyo shit
Alonzo ruva akadaro
Nehurombo inyika iyo yavasingazive Mwari uye ndosaka vaine vamwe vamwari vazhinji, asi isu tinonamata kuti rimwe zuva vachamuziva uye vagove nehupenyu hwakasiyana, Mwari anokuda iwe India.
Pindura kuna Flor alonzo
Ndingati iwe zvirinani kuti usataure zvinhu zvisina hunhu zvandinofunga uye iwe usingatomboziva zvarinoreva, kana iwe usingade iro peji zvirinani usataure kana zvisiri zvakanaka zvinhu ...
peji rakanaka kwazvo vanokodzera kufa hehehe ndinotenda ndinovimba uye ichandishandira zvakanyanya
maria elena cattaneo akadaro
Kana vachifamba netireyi uye ini ndinofungidzira kuti rusenzi iri tsika
Pindura kuna maria elena cattaneo
Pindura kune ghgjjsddg
Consuelo Galarza akadaro
rakanaka iro peji rinokodzera zvinopfuura gumi
Pindura Consuelo Galarza